Akụkụ na ndị ahịa gị | Martech Zone
Ndị na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe na Old-School
Na oku na-adịbeghị anya na nnukwu ụlọ ọrụ telecom, nke m na-agaghị ekwupụta (njirimara ha dị ka kpakpando ọnwụ na-acha anụnụ anụnụ),
Enwere m ịhụnanya n'ebe onye ọrụ ndị ahịa m nọ? ujo, ama m.
N’oge niile ana-akpọ oku ọ na - edepụta ihe m chọrọ, ọ na - ekwu ihe dị ka, “nke a bụ azụmahịa nke ọtụtụ n’ime ndị ahịa m dị ka ”, na“ ka m gwa onye njikwa ahụ ka m nweta us ihe ka mma ”, na“ Aghọtara m nkụda mmụọ gị, amaghị m ihe kpatara ya ha mee nke ahụ ”. O nwere ike ọ gaghị apụta ìhè na mbụ, ma ọ na-ekwu dị ka a ga-asị na ọ nọ m n'akụkụ. Ọ dị m ka m nwere nwoke (wo) n'ime, ahumachi, enyi m nke mikpuru n'ime ngalaba ọrụ ndị ahịa na-eche ka m kpọọ m iji mezue mkpuchi anyị.
Nanị, ọ kpọọrọ m us.
Mmekọrịta anyị na ndị nnọchi anya ndị ahịa na-abụkarị ndị na-emegide onwe anyị ma jupụta na nsonaazụ na-adịghị mma. Onye nnọchi anya ahịa a yiri ka ọ na-echebara ọnọdụ m echiche n'ezie. Ọ chọrọ iji aka m debanye aha m nke ọma, ma mee ka obi dị m mma na ya. Nke a abụghị obere azụmahịa ọ bụla. Anọ m na-agagharị site na ọrụ satịlaịtị m gaa na TV dijitalụ dị elu. Ọ na-enyere m aka ịkọwa nhọrọ m na ịge ntị na ihe m gwara ya. O nweghi mgbe m kpọrọ oku, ụjọ tụwara m na ọ naghị ege m ntị ma ọ bụ na ọ gaghị asọpụrụ ihe m kwuru.
Ihe omumu nke mbu bu na ndi oru ndi ahia bu ige ndi ahia gi nti, ma gbalie inyegharia nsogbu nye nsogbu. Onye nnọchianya a jiri amara, ọgụgụ isi, na ọkara ọkara elekere dozie nsogbu m! Ọ bụrụ na naanị ndị nnọchi anya ọrụ ndị ahịa niile dị otu a, agaraghị m esi na Dish Network (whoops!) Gaa AT&T (ọnye abụọ!!).
Ihe omumu bu na ihe omuma m - nkem onye ọrụ Ahụmahụ - na onye nnọchi anya ndị ahịa a emeela ka nghọta m banyere ụlọ ọrụ ahụ ka mma. Agbanyeghị na enwebeghị m kọntaktị na ngwaahịa, ahụmịhe onye ọrụ m adịlarị mma. Cheta, ọ baghị uru etu ngwaahịa gị siri dị mma - ọ bụrụ na ahụmịhe ịbịara ngwaahịa a adịghị mma, ndị mmadụ agaghị achọ ịnwale.
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaonye na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa
Atule gị na saịtị si n'usoro na ahaziri Search
Dee 21, 2009 na 9: 41 AM
Isoro ndị ahịa anyị na-anọ bụ ihe dị mkpa, ọkachasị maka anyị niile metụtara mgbasa ozi.